China Ubushushu obunokutshintshwa kunye ne-SpO2 mveliso kunye nabathengisi | Biotek
Banokulahlwa Ubushushu Probe
IBOT-B / BOT-D / IBOT-Q
Inkqubo yokulahla ubushushu bomzimba ilahlekileyo isebenzisa iimpawu ezibonakalayo zokunganyangeki kwe-thermistor ephezulu yokuchaneka kwisiphelo sophando olutshintshayo notshintsho lobushushu bangaphandle ukudibanisa iprosesa yeqondo lobushushu emzimbeni ekubekeni iliso kwimodyuli yokujonga ubushushu bomzimba. Utshintsho lwe-impedance ye-thermistor iguqulwa ibe sisiginali sombane kunye nemveliso ekubekweni esweni ukubala ixabiso lobushushu bomzimba elihambelanayo. Amacandelo acetyiswayo: igumbi lokusebenza, igumbi likaxakeka, ICU; amasebe ngokubanzi efuna umlinganiselo wobushushu oqhubekayo.
Cidityaniswe nokubeka iliso, ukulinganisa ubushushu be-esophagus, i-rectum kunye neempumlo.
1.Soft, agudileyo, kulula ukuyisebenzisa, ukuthintela usulelo oluwela umnqamlezo;
Ukunyamezela komjikelo we-2.Excellent;
Iphenyo ye-3Mini inokulinganisa ubushushu obuchanekileyo.
Uphenyo olu-4 olugciniweyo lungagcina iqondo lobushushu lokwenza ukuchaneka okuphezulu.
Banokubulawa SPO2 woluvo
IBOT-DS-A / IBOT-DS-P / iBOT-DS-I / IBOT-DS-N
Inzwa ye-SPO2 isetyenziselwa ukulinganisa okungapheliyo kunye nokubeka iliso kwi-oxygen saturation kunye ne-pulse rate emva kokuxhuma kwi-monitor ye-parameter okanye i-oximeter ye-pulse. Ipesenti yeoksijini kunye nehemoglobin egazini inokubonisa umxholo weoksijini kwinkqubo yokujikeleza kwegazi lomntu kwaye ibonise ukuba ngaba kukho i-anoxia okanye ukuphazamiseka kwento encinci. Umgaqo wokulinganisa: indlela yokulinganisa yangoku kukusebenzisa isivamvo somnwe wefotoelectric. Xa kulinganiswa, inzwa ifuna ukubekwa kuphela emnweni womntu. Umnwe usetyenziswa njengesikhongozeli esicacileyo sehemoglobin, kwaye isibane esibomvu esinobude obude obuyi-660 nm kunye ne-940 nm sisetyenziswa njengokukhanya kwe-infrared kufutshane nokukhanya kusetyenziswa ukukhanya komthamo wokukhanya ngokukhanya kwethambo ukubala ihemoglobin Uxinzelelo kunye nokugcwaliswa kweoksijini yegazi. Isixhobo sinokubonisa ukwanda kweoksijini yegazi emzimbeni womntu.
Isetyenziselwa ukulinganisa kunye nokujonga ukwanda kweoksijini kunye nenqanaba lokubetha.
Ukusetyenziswa kweSingle kuphela, ukunqanda ukusuleleka emnqamlezweni;
Umgangatho we-2.Top, ongenatyhefu, ukungasebenzi, intambo ethambileyo neyomeleleyo;
Egqithileyo Ababoneleli abaPhezulu i-China PVC Nasal Airway / i-Nasopharyngeal Airway
Okulandelayo: IBakala loNyango lwe-PVC ye-Endotracheal Tube ene-catheter yokutsala